I-Black Shark 2 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
I-Black Shark 2 Pro: I-Xiaomi entsha yokudlala i-smartphone
Kwithuba elingaphezulu kweveki edlulileyo yatyhilwaukuya kuthi ga kumhla wokubhengezwa kweXiaomi Black Shark 2 Pro. I-smartphone entsha yokudlala yohlobo lwaseTshayina ekugqibeleni isemthethweni. Isixhobo apho inkampani ifuna ukuqinisa isikhundla sayo njengenye yezona zinto zibalulekileyo kweli candelo lentengiso ukuza kuthi ga ngoku. Bayayenza ngemodeli ebonakala ngamandla ayo.
Kwezi veki sele sikubonile oko ukusebenza ayizukuba yingxaki kwifowuni. Emva kwe-ASUS ROG Ifowuni II yaziswa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, iBlack Shark 2 Pro ifowuni yesibini kwintengiso ukufika ngeSpapdragon 855 Plus njengeprosesa, eyona chip inamandla phaya namhlanje.
Uyilo lwefowuni lugcina ulayini ofanayo kwiimodeli zangaphambili zorhwebo lwaseTshayina. Amagophe ajonge ngasemva ime ngaphezulu kwayo yonke into, ngeli xesha eza ngemibala emine: iBolt (emnyama-luhlaza), uMdyarho (obomvu-luhlaza), iFlamingo (bomvu-bomnyama), iBala eliQhenqileyo (ngwevu-luhlaza) kunye neNtsomi uRay. (buluhlaza okwesibhakabhaka). Ke sijamelene noyilo lokudlala kakhulu.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Black Shark 2 Pro
Ukucaciswa kweXiaomi Black Shark 2 Pro
Uyilo lunokushiya utshintsho oluncinci okanye iindaba, kodwa uXiaomi uqinisekisile ukwazisa utshintsho oluninzi ngaphakathi kule Black Shark 2 Pro. Ke sifumana ifowuni enamandla, Ngeyona processor ilungileyo kule ndawo. Ke sinokuyonwabela imidlalo emide ngayo. Imodeli enokuphumelela kweli candelo lentengiso. Ukucaciswa kwefowuni:
Isikrini: I-AMOLED eyi-intshi engama-6.39 isisombululo: 2340 x 1080 pixels, ratio: 19.5: 9 and Refresh rate: 240 Hz
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 855 Plus
i-ram: I-12 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-128/256/512 GB
Ikhamera esemva: I-48 MP + 13 MP nge-f / 1.75 kunye f / 2.2 nge-2x zoom kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili: MP engama-20 ene-f / 2.0 ukuvula
ConectividadIbhendi ezimbini zeWiFi, iUSB-C, iBluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G / LTE
abanye: Iscreen sensor yeminwe yeminwe, i-NFC, Ukupholisa ulwelo i-3.0, DC Ukukhupha i-3.0
Ibhetri: I-4000 mAh ene-27W yokutshaja ngokukhawuleza
Ubukhulu: 163,61 x 75,01 x 8,77mm.
U bunzima: Iigram ezili-205
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie ene-MIUI
Olunye lolona tshintsho luphambili kule Black Shark 2 Pro sele ifikile kunye nescreen sayo. Uphawu lwaseTshayina lusishiya nepaneli enobungakanani obungu-6,39-intshi, kodwa oko kuphuma kwinqanaba lokuhlaziya i-240Hz. Lixabiso elikhethekileyo kwi-smartphone, eya kusinika amava omsebenzisi ombane kule meko. Inqaku eliphumelela abasebenzisi abaninzi malunga noku. Nangona inani lemidlalo ehambelanayo lilinganiselwe okwangoku.
Sifumana ikhamera yangemva kabini, ene-sensor ephambili ye-MP eyi-48 kunye ne-13 MP yesibini sensor. Ngelixa ngaphambili sine-20 MP sensor. Ibhetri yenye into ebalulekileyo kule Black Shark 2 Pro, ngomthamo we-4.000 mAh. Iya kusinika ukuzimela okuhle kwaye iza nentlawulo ekhawulezayo ye-27W. Ke sinokutshaja lonke ibhetri ngokukhawuleza. Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen sefowuni. Ukongeza, uphawu lwaseTshayina lusishiya ne-DC Dimming 3.0 kunye nenkqubo entsha yokupholisa ulwelo, ukuze isebenze ngcono kwisixhobo.
Ifowuni ibhengeziwe ngalo mzuzu e-China, ekukuphela kwentengiso apho kuqinisekiswe ukwaziswa kwayo. Kuya kufuneka ukuba silinde iiveki ezimbalwa ukuze isungulwe eYurophu. Nangona iifowuni zomdlalo wohlobo zingakhange zisasazwe kakuhle eYurophu. Ke kungafuneka silinde ixesha elithile ukuze ifike ngokusemthethweni. Siya kuzimamela iindaba.
I-Black Shark 2 Pro iya kuthengiswa kwiinguqulelo ezimbini e-China, Amaxabiso asele esesikweni. Basinceda ukuba sifumane umbono wokuba le fowuni ingabiza malini xa isungulwa eYurophu. Ezi nguqulelo zimbini kunye namaxabiso azo zezi:
Imodeli ene-12/128 GB inexabiso kwi-2.999 yuan (390 euros kutshintsho)
Inguqulelo ene-12/256 GB isungulwe ngexabiso le-3.499 yuan (456 euros to change)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Black Shark 2 Pro: I-Xiaomi entsha yokudlala i-smartphone
UGoogle Pay uhambelana neebhanki ezintsha eSpain
Okokugqibela iyafumaneka i-Android Auto interface entsha